Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Ay Qoreen Wargeysyada Yurub Maanta Oo Axad Ah | Laacib.net
Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Ay Qoreen Wargeysyada Yurub Maanta Oo Axad Ah
June 9, 2019 Balaleti 2
Manchester United ayaa dooneysa inay heshiis amaah ah kula soo wareegto xiddiga garabka ka ciyaara ee Real Madrid Gareth Bale oo 29 sanno jir ah. (Sunday Mirror)
Manchester United iyo kooxda ay xafiiltamaan ee Manchester City ayaa ku tartamaya saxiixa 26 jirka daafaca dhexe Harry Maguire laakiin City waxa ay ka dideysaa lacagta Leicester CIty ay dooneyso oo gaareysa 90 milyan ginni. (Mirror)
Laakiin City ayaa sidoo kale ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo daafaca kale ee Leicester City Ben Chilwell, waxaana ay ku qarashgareyn kartaa 22 jirkaan iyo Harry Maguire lacag gaareysa 125 milyan ginni. (Star)
Liverpool ayaa qeyb ka ah lix kooxood oo ceyrsanaya daafaca dhexe ee 19 jirka kooxda Ajax Matthijs de Ligt. (Mirror)
Xiddiga khadka dhexe ee England Jesse Lingard oo 26 jir ah ayaa waxaa loo soo bandhigi doonaa qandaraas cusub oo 130 kun ginni uu ku qaadanayo isbuucii si uu u sii joogo Manchester United. (Sun on Sunday)
Jose Mourinho ayaa u sheegay asxaabtiisa inuu si dhab ah uga fiirsanayo inuu tababare u noqdo Newcastle, waxaana uu diyaar u yahay inuu la hadlo ninka iibsanaya kooxda Sheikh Khaled bin Zayed Al-Nehyan. (Sunday Mirror)
Arsenal ayaa ku dhow inay dhameystiro saxiixa labada xiddig ee kooxda Sampdoria oo kala ah 25 jirka khadka dhexe Dennis Praet iyo daafaca dhexe Joachim Anderson. (Gazzetta dello Sport)
Xiddiga kooxda Dalian Yifang iyo xulka Belgium Yannick Carrasco oo 25 jir ah ayaa isna ku dhawaanaya inuu ku biiro Arsenal. (Sport)
Tottenham ayaa 40 milyan ginni ku dalbaneysa daafaca dhexe ee kooxda Bournemouth iyo xulka Netherlands Nathan Ake oo 24 sanno jir ah. (Sun on Sunday)
Liverpool ayaa diyaar u ah inay xiddiga garabka ka ciyaara ee Wales Harry WIlsson ay ku fasaxdo lacag gaareysa 21 milyan ginni. 22 jirkaan ayaa amaah ugu ciyaaray xilli ciyaareedkii hore kooxda Derby iyadoo kooxaha Hoffenheim iyo RB Leipzig ay xiiseynayaan. (Sunday Mirror)
Goolhayaha halyeeyga ah ee Talyaaniga Gigi Buffon oo 41 sanno jir ah ayaa kula laabanaya kooxdiisii ugu horeysay ee Parma ka dib markii uu ku dhawaaqay inuu ka tagayo PSG xagaagan. (La Gazzetta dello Sport)
David Beckham ayaa doonaya in daafaca midig ee Ecaudor Antonio Valencia oo 33 jir ah uu ku biiro kooxdiisa Inter Miami. Valencia ayaa ka tagay Manchester United xagaagan madaama uu qandaraaskiisa dhamaaday. (Sun on Sunday)
Madaxweynaha Benfica Luis Filipe Vieira ayaa sheegay in sida kaliya ee kooxda ay ku ceshan karto weeraryahankeeda 19 jirka ah Joao Felix inay tahay inay iibiyaan oo ay amaah ay ku soo ceshtaan xilli ciyaareedka danbe. Manchester United iyo Manchester City ayaa xiiseyneysa xiddiga reer Portugal. (Sunday Mirror)
Manchester United ayaa qandaraas cusub oo afar sannadood ah u soo bandhigeysa xiddiga khadka dhexe ee Brazil 23 jirka Andreas Pereira. (Sun on Sunday)
Xiddiga khadka dhexe ee Chelsea Tiemoue Bakayoko ayaa doonaya inuu sii joogo Blues xilli ciyaareedka danbe ka dib markii uu amaah ku qaatay AC Milan xilli ciyaareedkii la soo dhaafay. (L’Equipe)
Arsenal ayaan dooneynin inay la soo wareegto goolhaye cusub xagaagan inkastoo uu ciyaaraha ka fariistay goolhayahooda Petr Cech oo 37 sanno jir ah. (Sunday Mirror)
Grezman Barcelona ma gadatay
Abdihakiim zeyech says:
Maya Maya madooneyso Grezmann fc Barcelona